Kutyisa muOslo: Vashanu vakakuvara semurume akapakata zvombo mumbavha yeamburenzi makondomu akamira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Kutyisa muOslo: Vashanu vakakuvara semurume akapakata zvombo mumbavha yeamburenzi makondomu akamira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • nhau • Norway Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Oslo mapurisa akapfura ndokusunga murume akapakata zvombo akaba amburenzi ndokuishandisa kugondohwe vasina mira pavakaramba vachiita zvekupenga muguta reNorway neChipiri masikati.
Munhu akapakatira pfuti akabatwa asi haana kukuvara zvakaipisisa, kunyangwe hazvo mapurisa anonzi akavhura pfuti paamburenzi panguva yavaienda.
Vanhu vashanu vakakuvara muchiitiko ichi, kusanganisira vacheche vaviri, asi mamiriro avo anofungidzirwa kuti akadzikama uye vadiki vavo vakakuvadzwa.
Mifananidzo yekuona kubva pachiitiko ichi yakatora nguva iyo mapurisa akaita kuti ambulensi ive yakakomberedzwa zvishoma asi musori akakwanisa kunzvenga uye kutyaira achienda kunyangwe aive pasi pemoto.
“Vana vaviri vakakuvara mushure mekunge amburenzi yakapambwa yarova mhuri. Iwo mapatya, ane mwedzi minomwe ekuberekwa, vari kurapwa, ”mutauriri wechipatara cheOslo University Anders Bayer akadaro.
Iyo ambulensi yakabiwa panguva ingangoita 12:30 nguva yemuno mushure mekupindura tsaona yemumugwagwa. Sekureva kwaBayer, hutsinye hwakatora kwemaminetsi makumi mana nemashanu panguva iyoyo imwe yemaamburenzi echipatara akakwanisa kumedza mota yakabiwa nekuipinira kwenguva yakareba kuti mapurisa asunge.
“Mimwe maminetsi gare gare imwe yedzedu maamburenzi yakwanisa kumisa mota yaive yabiwa nekurovera mukati mayo. Ipapo mapurisa akauya mushure metsaona ndokumutora, ”akadaro.
Mapurisa akagadzira coni yekuchengetedza yakatenderedza chiitiko ichi apo vachiedza kutsvaga chikonzero chechiitiko ichi. Iyo ambulensi inonzi yakabiwa mudhorobha reTorshov.
Makara aionekwa mumigwagwa yeOslo apo rampage yaibvarura nemuguta nenzvimbo dzakavakidzana.
Mapurisa akazonyora paTwitter kuti iri kutsvaga mukadzi zvine chekuita nenjodzi yemumugwagwa yakaitika panguva yekuba amburenzi nekumhanyisa kwakatevera.
“Mumwe murume akapakata zvombo akaba amburenzi, ndokutyaira ndokurova vamwe vanhu. Tamuwana izvozvi, ”mutauriri wemapurisa akadaro, kunyangwe vakaramba kutaura kuti vangani vanhu vakakuvara neamburenzi yakabiwa kana kuti pane munhu akafa muchiitiko ichi.
"Hapana chinoratidza kuti chiitiko ichi chine chekuita nehugandanga," mutungamiri wemapurisa eOslo Erik Hestvik akaudza vatori venhau.